Tora Kutarisa Mukati 'Halloween Inouraya' uye Isingaregi Chiito uye Ropa - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Tora Kutarisisa Mukati 'Halloween Inouraya' uye Isina-Stop Chiito uye Ropa
Tora Kutarisisa Mukati 'Halloween Inouraya' uye Isina-Stop Chiito uye Ropa
"Non-Stop chiito uye ropa"
by Trey Hilburn III October 13, 2021 437 maonero
David Gordon Green's Halloween Inouraya yave pedyo pano. Yakave padyo zvekuti tinogona kunzwa kunhuwa kweropa uye maputi. Chibage sirasi ropa, hongu. Kubatsira nekumirira ikoko kusvika Chishanu, tine zvishoma kuseri kwezviitiko chiitiko kuti tione zvakanyanya zviri kuitika mutaundi reHaddonfield panguva ino kutenderera.
Kutarisisa kwakatarisana kunosanganisira kudzika kwakadzika uko David Gordon Green aida kutora nguva ino kutenderera kuti asvike panhongonya yekushungurudzika kweguta uye kupindura kwekutya nechisimba. Inzwi rakajairika? Zvinofanira zvachose, mhomho yevanhu ichiimba "USA" kasingaperi ichitsvaga mhomho yekutonga chokwadi haisi kuita kunge iri kure.
Kupfuura zvese, kana iwe ukateerera Judy Greer, iwe unoziva kuti iyi firimu ichave iri nezve "isingamise ropa uye chiito". Tinogona zvachose kuseri kwechinhu chakadai. Asi, zvakare zvakanaka kuti uzive kuti iyo firimu haisi kuuya kwatiri neropa rakachena risina musoro uye ura. Rudzi irworwo rwechinhu rwakakura uye rwese asi, ini ndinoda kuti pane zvishoma zvimvuri zvemagariro ekutaura pamusoro penyika dzinoitwa nekutya nechisimba chakanyanya.
Imi mose munofungei nezve iyi yakadzika dhivha? Zvinoita kuti iwe ude kuona iyo bhaisikopo zvakanyanya? Tiudze mune yedu Facebook uye Twitter inotsanangura.